Al-Shabaab oo wacad ku martay in ay sii wadayaan weerarrada ka dhanka ah AMISOM - Sabahionline.com
Al-Shabaab oo wacad ku martay in ay sii wadayaan weerarrada ka dhanka ah AMISOM Abriil 30, 2012
Al-Shabaab ayaa sii wadi doonta weerarrada ay la beegsanayso ciidamada AMISOM, iyadoon waxba ka soo qaadayn in dhawaan la beddelay qaabdhismeedkii ciidanka, sidaa waxaa idaacad al-Shabaabka taageerta Isniintii (30-ka April) u sheegay afhayeenka al-Shabaab, Sheekh Cali Maxamuud Raage. Qodobbo la xiriira
Raage ayaa sheegay in baabuurta la isku qarxiyo iyo weerarrada kale ee lala beegsanayo ciidamada Midowga Afrika (MA) aanay is-taagi doonin. Wuxuu sheegay in xaqiiqda ah in ay AMISOM magacawday taliye cusub ay calaamad u tahay in ay ku guul-darraysatay dagaalkii ay kula jirtay al-Shabaab, Shabakadda Warbaahinta Shabeelle ee Soomaaliya ayaa arrintaa werisay. Bishan ayuu Madaxweynaha Kenya Mwai Kibaki Sarrreeye Gaas S.N. Karanya u magacaabay in uu noqdo taliye-xigeenka AMISOM ee dhinaca hawlgallada.
"Waxaannu sii wadi doonnaa dagaalkeenna jihaadka ah ee aannu kala soo horjeedno AMISOM-ta soo duushay iyo kuwa raacsan ee isku sheega dawladda ku-meel gaarka ah,” ayuu yiri Raage, sida ay sheegtay Idaacadda Kulmiye ee Soomaaliya. AMISOM ayaa bilihii la soo dhaafay degmooyin muhiim ah oo Muqdisho ku yaal ka qabsatay al-Shabaab haatanna qorshaynaysa in ay hawleheeda sii ballaariso oo Muqdisho sii dhaafiso. Muxuu kula yahay qoraalkan?